Waa maxay mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah. Kaladuwanaanshaha | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | | Shaqada
Markaan raadino shaqo mid kamid ah arrimaha aan inta badan tixgelinno waa mushaharka; Maaddaama la raadinayo in tani ay waafaqsan tahay waqtiga la geliyay, iyo tallaabooyinka la qaaday, sidoo kale iyada oo lagu xisaabtamayo awoodda shaqsiyeed ee u qabashada shaqada si hufan taasna waxay faa'iido u tahay dhaqaalaha shirkadda. Hadda, intee in le'eg baa waqtigeennu runtii u qalmaa? Immisa lacag ah ayaan u baahan nahay si aan u kasbano si aan u daboosho baahiyaheena?
Mid ka mid ah shakiga ugu badan ee soo noqnoqda ayaa ah ogaanshaha farqiga u dhexeeya mushaharka dhabta ah iyo kan magacaabanSidaa darteed, hoosta waxaan ku sharaxeynaa mid walba waxa uu ka kooban yahay iyo sida ay ugu kala duwan yihiin.
1 Waa maxay mushaharku?
2 Fikradaha mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah
2.1 Mushaharka magacaaban
2.2 Mushahar dhab ah
3 Waa maxay farqiga u dhexeeya mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah?
3.1 Awood wax iibsi, awood wax iibsi
3.2 Sidee labada mushahar u kordhinayaan
4 Gabagabada mushaharka magacaabista iyo mushaharka dhabta ah
Waa maxay mushaharku?
Marka hore, waa inaad taas ogaataa mushaharku waa lacagta uu shaqaaluhu helo, badiyaa si joogto ah (badanaa waa bille). Halkaan waxaad ku kala saari kartaa mushaharka magacaaban iyo mushaharka dhabta ah, oo aan hoos ku sharxi doono:
Fikradaha mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah
Waxaa jira laba shuruudood oo lagu muujinayo mushaharka qofku haysto, halkan su'aasha ayaa ka taagan sababta loo doonayo laba xilli oo isku mushahar ah, maaddaama ay xaqiiqdu tahay inay laba yihiin macnaheedu ma aha in labadaas mushahar la qaatay, laakiin waxay ereyadan u adeegayaan inay muujiyaan laba arrimood oo loo arko inay muhiim u yihiin mushaharka; ereyadan ayaa kala ah mushahar magac u yaal ah iyo mushahar dhab ah, Marka xigta, sharaxaad kooban oo ku saabsan mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la siin doonaa.
Ereyga mushahar magac u yaal ah waxaa loola jeedaa mushahar ahaan macno ahaan lagu muujiyey lacag; Waa wadarta lacagta la siinayo shaqaalaha hawsha la qabtay inta lagu jiro maalinta cayiman. Markaan tixraaceyno mushaarka magacaaban, ma siin karno fikrad guud oo ku saabsan heerka ama qiimaha dhabta ah ee mushaharka. Qiimaha runta ah ee mushaarkani wuxuu kuxiran yahay gabi ahaanba heerka qiimaha u dhigma walxaha isticmaalka shakhsiga ah, sidoo kale qiimaha adeegyada loo baahan yahay, iyo sidoo kale mugga cashuuraha, iyo kharashyada kale ee guud.
Waqtigan xaadirka ah, wadamadaas meesha nidaamka xukuma la wareegistu uu yahay Hanti-wadaaga, in kasta oo ay dhacdo wax muuqda kordhinta muujinta mushaharka marka loo eego qiimaheeda lacageedMaxaa loo tixgeliyaa inay tahay mushaharka dhabta ah ee shaqaaluhu helaan waxay u egtahay inuu hoos u dhacayo sababtoo ah kororka qiimaha maqaallada loo tixgelinayo inay yihiin qodobbada isticmaalka guud, iyadoo loo tixraacayo isticmaalka uu shaqaaluhu sameeyo si uu ugu qanco baahiyihiisa; Hoos udhaca qiimaha sidoo kale waxaa sabab u ah kororka culeyska canshuurta, tani waa sababta ujeedada gobolka ay tahay in shaqaaluhu ay yihiin kuwa xambaara culeyska oo dhan ee ka dhasha dhibaatooyinka dhaqaale iyo culeyska ay keeneen xirfadaha hubka.
Taas bedelkeeda, bulshooyinka nidaamku xukumo hantiwadaagga, kororka mushaharka magacaaban -khaasatan markay tilmaamayso qaybaha shaqaalaha iyo shaqaalaha ee qaata mushahar yar-, markay lasocoto dhimista qiimaha waxyaabaha aasaasiga ah ee macaamiisha loogu talagalay shaqaalaha, waxa loogu yeero mushaharka dhabta ah ee shaqaalaha oo dhan si weyn ayaa loo kordhiyay. Qayb aad muhiim u ah oo tan ka dhiganta ayaa ah dhammaystirka mushaharka magacaaban, oo ay bixiso lacagaha macaamiisha bulshada, oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha wadajirka ah ee dhammaan xubnaha bulshada hantiwadaagga. Qoondeynta ay sameysay Gobolka Hantiwadaagga iyo sidoo kale ururada kale ee bulshada ee loo abuuray ujeedooyin la sheegay, waxay ku kordhayaan dhaqtarka saddex meelood meel dakhliga shaqaaluhu helaan. Maaddaama waxsoosaarka bulshada uu kordhayo isla mar ahaantaana u qalmidda shaqaaluhu kor u kacayso, si tartiib tartiib ah heerarka mushahar ee shaqaalaha, shaqaalaha iyo indheer garadka ayaa u soo dhowaanaya illaa ay heer keliya ku sii ahaanayaan.
Mushahar dhab ah
Qeexitaankan waxaa loola jeedaa mushaharka lagu muujiyo hab nololeedka iyo adeegyada oo shaqaaluhu ku haysto mushaharkiisa; Waxay tilmaamaysaa xaddiga alaabta macaamiisha ee shaqaaluhu awoodo inuu helo, iyo sidoo kale adeegyada uu shaqaaluhu ku iibsan karo mushaharkiisa magac u yaal ah (kaasoo lagu maareeyo qaddarka lacageed ee shaqaaluhu helo). Qiimaha la siin karo mushaharka dhabta ah waxay kuxirantahay tixgelinno dhowr ah, galaan qaar ka mid ah waxay kuxirantahay mushaharka magacaaban, qodob kale ayaa ah heerka qiimaha taas oo u dhiganta alaabada macaamiisha iyo sidoo kale heerka qiimaha adeegga, baaxaddooda sidoo kale waxaa go'aamiya qiimaha kirada oo ay ugu wacan tahay canshuuraha ay ku soo rogaan shaqaalaha dawladuhu.
Wadamada ay xukumaan Hanti-wadaaga, waxa badanaa ka dhaca waa in qiimaha sheyga iyo waliba adeegyada, marka lagu daro kirooyinka iyo canshuuraha, si isdaba joog ah ayey u korayaan. Halganka fasalka ee ka jira nidaamyadan ayaa sababaya mushaharka magac u yaal ah inuu is beddelo sidoo kale. Ficil ahaan waa sharci shuuciyad in mushaharka dhabta ah ee shaqaalaha u dhaqan sida ay u badan tahay inuu yaraado. Wadamadan ay xukumaan nidaamka hanti-goosadku, xaqiiqo jirta oo si weyn u saameysa mushaharka dhabta ah, otomatiga ah ee habka wax soo saarka iyo soosaarka la fulinayo, waxay keenaysaa xaqiiqda kordhinta tirada shaqaalaha iyo shaqaalaha hooseeya. xirfad leh sidaa darteedna shaqaalahan hel mushahar yar oo magac ahaan ah taas oo illaa xad si taban u saamaynaysa baaxadda mushaharka dhabta ah.
In kasta oo loolanka fasalka uu sababayo in mushaharka magac ahaanta loo kordhiyo, runta ayaa ah in kororka mushaharka magac u yaalku uusan dhab ahaantii magdhabi doonin hoos u dhaca baaxadda mushaharka dhabta ah, maaddaama waxyaabaha kale ee go'aamiya, sida qiimaha qodobbada Isticmaalka iyo canshuuraha ee loo baahan yahay ayaa ka dhaqso badan mushaharka magacaaban. Sidan ayaan ku ogaan karnaa in isbeddelka guud, in kasta oo mushaharka magacaaban uu kordhayo, ay taasi tahay mar kasta shaqaaluhu ma awoodo inuu iibsado badeecooyinka aasaasiga ah ee macaamiisha. Qaabka ay dowladda ama hay'adaha u xilsaaran dhaleeceynta iyo nidaaminta arimahan ay u xisaabiyaan celceliska mushaarka dhabta ah ee shaqaalaha ayaa ah, ma ahan kooxo gaar ah oo bulshada ka tirsan ee waa isku darka mushaarka shaqaalaha iyo mushaharka shaqaalaha. Shaqaalaha mushahar fiican qaata, kuna daraya kan maareeyayaasha shirkadaha iyo agaasimayaasha, xubnaha kale ee bulshada, ha ahaato mushaharkooda magacaabista mid hooseeya ama sare.
Maamulada ay xukumaan hantiwadaaggu, arintan waxaa loo maareeyaa si ka duwan maxaa yeelay mushaharku ma noqonayo qiimaha shaqaalaha, tani waxay ka dhigan tahay Mushaharka shaqaalaha kuma xirna tababarka tan, laakiin taa badalkeeda waxay laxiriiraan arrimo tayo leh oo lagu soo bandhigo natiijooyinka shaqaalaha; Taabadalkeed, waxay wakiil ka tahay muujinta lacagta qayb ka mid ah dakhliga qaranka oo u dhigma shaqaalaha iyo shaqaalaha shirkadda ama warshadaha si loo daboolo baahiyaha isticmaalka shakhsi ahaaneed; Sidii hore loo daboolay, dakhligan qaran waxaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo tayada shaqada, laakiin sidoo kale tirada. Marka loo eego qaab dhismeedka soo saarida nidaamka hantiwadaagga horumarka, mushaharka dhabta ah ayaa si joogto ah u kordhaya. Doodda ayaa ah in mushaharka dhabta ahi wuxuu ku saleysan yahay wax soo saarka shaqada ee dhaqaalaha qaranka. Shaqaalaha bulshada hantiwadaagga ah waxay leeyihiin kaabis lama huraan ah oo ah mushaarka, oo ah kaabis ku saleysan lacagaha macaamilka bulshada, taasoo kobcinaysa dakhliga dhabta ah ee shaqaalaha bulshada hantiwadaagga ah seddex meelood meel.
Waa maxay farqiga u dhexeeya mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah?
Habka ugu wanaagsan ee aan ku kala saari karno oo aan markaa ku fasiri karno farqiga u dhexeeya labada nooc ee mushaharka, waxay ku jiifaan dabeecadooda. Halka mushaharka magacaaban wuxuu saameyn ku yeelan doonaa qeybta tirada iyo intee lacag ah ayaan helnaa, mushaharka dhabta ah wuxuu diirada saari doonaa helitaanka alaabada iyo imisa ayaan heli karnaa. Hadday qayb magacaaban (ama lambar) leedahay suurtogalnimada in lagu beddelo badeecooyin ka wanaagsan ama sarrifka ugu wanaagsan ee lacagaha kale waxay ku xiran tahay siyaasadaha lacageed ee aag kasta. Sidaa darteed, in kasta oo mushahar magac u yaal ah uu yahay midka ugu toosan uguna fudud ee tarjumaadda, run ahaantii qaybta muhiimka ahi waa inta aan ku qaban karno (mushaharka dhabta ah). Si tan loo sameeyo, waxaan arki doonnaa farqiga ugu caansan ee u dhexeeya mid walba iyo sida sicir bararku ugu dambeyn u saameynayo.
Awood wax iibsi, awood wax iibsi
Dhamaantood, tan ugu haboon waa awooda wax iibsi ee shaqaaluhu leeyahay. Taasi waxay u egtahay inay la qabsato waqti ka dib iyo dhaqdhaqaaqa foosha sicir bararka, oo u turjumaya waxyaabaha soo socda:
Mushaharka Magaca: Waa qaybta tirada ee xukunta. Wadarta lacagta la helay. Laakiin tani macnaheedu maaha inaan haysanno wax intaa ka badan, maaddaama lacagtu tahay aalad lagu iibsado alaabada. Haddii qiimaha badeecaduhu sare u kacaan oo mushaharkeenna magacu hooseeyo, waxaan awoodi doonnaa inaan wax yar iibsanno. Xaaladdan oo kale, mushaharka magac u yaalku waa qiimaha ka muuqda mushaharka, tusaale ahaan, 1.300 XNUMX bishiiba.
Mushaharka dhabta ah: Waxay noqonaysaa qaybta "jidheed" ee mushaharka magacaaban, taas oo ah, xaddiga alaabta aan iibsan karno. Qofka 15 sano ka hor qaatay € 1.300 oo tusaale ahaan uu sii helayo maanta 1.300 1.300, mushaharkiisa magacaabista ah ma kordhin lahayn ama kama yaraan lahayn. Si kastaba ha noqotee, sicir bararka iyo qiimaha maciishada ayaa sare u kici lahaa, marka with 15 maanta waxaan iibsanayaa waxyaabo kayar XNUMX sano ka hor.
Si aad u noqoto mid sax ah, 15kii sano ee la soo dhaafay celceliska sicir bararka ee aagga Euro wuxuu ahaa 1%. Tan macnaheedu waa taas 15 sano gudahood qiimaha maciishada ayaa kor u kacay 26%. Haddii qofku qaadan lahaa 1.300 15 1.000 sano ka hor, kharashkiisuna yahay € 300, wuxuu badbaadin lahaa € 1.260 bishii. Mushaharkiisii ​​dhabta ahaa wuxuu siiyay dabacsanaan. Si kastaba ha noqotee, haddii mushaharkiisa la ilaalin lahaa, maanta isla qiimaha nolosha wuxuu ku kici lahaa 40 XNUMX, sidaas darteed wuxuu badbaadin lahaa oo keliya € XNUMX bishii. Mushaharkaaga dhabta ah ee kiiskan wuxuu noqon lahaa mid aad u adag.
Sidee labada mushahar u kordhinayaan
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waa in la fahmo intee in le'eg ayay tahay in mushaharkeennu hagaajiyo si loo ilaaliyo heerka nolosheena. Marka la eego xaqiiqda ah in mushaharka dhabta ahi uu yahay midka aan ku qeexno helitaanka alaabooyinka, iyadoon loo eegin lacagta lagu isticmaalo mushaarkeenna, hadafkeennu waa sida caadiga ah inaan sii wadno ama kordhinno. Si aan u ogaano in awooddeena wax iibsi ay soo hagaagtay, aan eegno sicir bararka.
Si loo ilaaliyo isla awooda wax iibsiga, taas oo ah, mushaharka dhabta ah, mushaharkeena magac u yaal waa inuu ahaadaa kororka safka sicir bararka. Tani waxay muujineysaa in haddii sicir bararka hal sano uu kordhay 2%, mushaharkeena magac u yaal waa inuu sidoo kale kordhiyaa 2%. Sidan oo kale, mushaharka dhabta ah waa lagu sii wadi karaa.
Kordhinta mushaharka magacaaban ee ka sarreeya sicir-bararka waxay u horseedi doontaa mushahar dhab ah oo wanaagsan maxaa yeelay awooddeena wax-iibsi way sii kordheysaa. Taasi waa, haddii sicir bararku hal sano gaaro 2%, illaa iyo inta mushaharkeennu kordhayo 2% ama ka badan, waxaan horumarin lahayn awooddeena wax iibsi.
Si taasi u dhacdo, waa in la xusuusnaadaa markaan ka hadlayno kordhinta mushaharka ee 2%, waa inaan eegnaa mushaarka saafiga ah. Mushaharka guud wuxuu ku kordhin karaa isla safka sicir bararka, 2%. Si kastaba ha noqotee, kororkaan ayaan daruuri ka muuqan karin mushaharka saafiga ah haddii lacagaha laga jaro mushaharka ay sidoo kale kororto marka la gelayo qaybta canshuurta dakhliga ee ka duwan.
Gabagabada mushaharka magacaabista iyo mushaharka dhabta ah
Gabagabadii, waxaan dhihi karnaa taas mushahar magac u yaal ah waa mushaharka uu shaqaaluhu ku helo beddelka shaqadiisa; dhanka kale, maxaa lagu qeexay mushaarka dhabta ahi wuxuu aad ugu dhowyahay qarashka alaabada iyo adeegyada taas oo looga baahan yahay inay daboosho baahiyaha.
Marka laga eego xagga dhaqaalaha, mushaharka dhabta ahi wuxuu tilmaamayaa waxa mushaarku awoodo inuu iibsado, haddii awoodda wax iibsi ee shaqaaluhu u helayo mushaharkiisa; Waxaa la iftiimiyay in mushaharka noocan ah uu saameeyay sicir bararka, taas oo ah, kor u kaca qiimaha sababo laxiriira xakameyn la'aanta.
Si si fiican loo fahmo farqiga u dhexeeya midka iyo kan kale, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan si adag u qeexnaa. Mushaharka magacaaban waa xaddiga lacagta ee shaqaaluhu helo, halka mushaharka dhabta ahi yahay mid la xidhiidha qiimaha badeecadaha iyo adeegyada.
Farqiga ugu weyn uguna muhiimsan waa kan mushaharka magacaaban waa la kordhin karaa iyada oo aan daruuri loo kordhin daryeelkoodaTani waxay ka dhigan tahay in qiimaha badeecadaha iyo adeegyaduba ay kor u kici karaan wax ka badan ama la mid ah mushaharka magacaaban. Sababtaas awgeed, waa mushaharka dhabta ah ee ku bixiya qaab aad waxtar badan u leh waxa mushaharku runtii u qalmo, taas oo ah, waxa shaqaaluhu ku iibsan karo mushaharkiisa.
Markay arrimaha oo dhami isu yimaadaan si ay kordhinta mushaarka dhabta ah waxaa loo arkaa war wanaagsanWay fiicantahay maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in shaqaaluhu heli karo badeecooyin iyo adeegyo badan oo qanciya baahidooda; dhinaca kale, haddii ay hoos u dhacdo, waxay ka dhigan tahay inay leeyihiin awood wax iibsi oo ka yar, sidaas darteedna ay hoos u dhacayso awoodda ay u leeyihiin inay qanciyaan baahidooda.
Miyaad shaki ka qabtaa waa maxay mushaharka aasaasiga ah? Waxaan kuu sheegeynaa:
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato mushaharka aasaasiga ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Waa maxay mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah
Davds - Barnaamijka mushaharka iyo mushaharka dijo
Su'aashuna way soo bixi kartaa intee in le'eg ayey tahay waxa ugu habboon ee u dhigma waxa la siinayo shaqaalaha.
Kala-bixinta mushaaraadka ku saleysan xogta iyo isbarbardhigyada maareynaya inay na siiyaan macluumaadka saxda ah si aan u qancino baahiyaha shaqaalaha ee la xiriira shaqadooda waxaa xitaa fududeyn kara waxyaabo badan oo aaladaha dijitaalka ah, si loo sameeyo lacag bixin siman oo adeegyadooda ah.
Kajawaab Davds- softiweerka mushaharka iyo mushaharka
Hello Davds, halkan Isbaanishka, mushaharku wuxuu ku baxaa heshiisyo wadareed, iyadoo kuxiran shaqada aad qabato, waxaad ku jirtaa heshiis oo waxaad haysataa ugu yaraan mushahar, dhanka kale loo shaqeeyaha ayaa ku siin kara mushaharka aad rabto, laakiin ma awoodo la joojiyo heshiiskaaga. Hadafku waa waxa aad dhahdo, laakiin wali waan ku dhownahay nidaamkaas, ugu yaraan halkan. Salaan iyo mahadsanid wax ku biirinta.
Jawaab Susana Maria Urbano Mateos
Itzel - Qalabka mushaarka dijo
Waad ku mahadsan tahay maqaalka Waxaan u arkaa habka maadada loo wajahayo mid aad u xiiso badan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan aqriyay dhowr maqaal oo mowduuca ku saabsan kani waa kan aan aadka u jeclaa. Hambalyo, waan ku faraxsanahay waqtiga aad ku qaadatay qoristiisa.
Jawaab Itzel - Tab Mushaharka
Wadamada soo saara shidaalka
Waa maxay isweydaarsiga forex?